चीनलाई आक्रमण गर्न भारतले बनायो लामो क्षेप्यास्त्र
नयाँ दिल्ली, १७ माघ । चीनका प्रमुख शहरमा आक्रमण गर्न सक्ने लोमो क्षेप्यास्त्र बनाउन भारत सफल भएको छ । शनिबार पहिलोपल्ट घुम्ती प्रक्षेपकबाट प्रक्षेपण गर्नसकिने लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण प्रक्षेपण गरेको छ ।...
सत्ता बचाउन प्रतिपक्षी नेताको घरमा विद्युत लाइन काटियो !
ढाका, १७ माघ । सत्ता गिराउने चलखेल बढेपछि प्रतिपक्षी नेताको घरमा विद्युत लाईन काटिएको छ । तर यो समाचार नेपालको भने हाईन् । बङ्गलादेशमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता खालेदा जियालाई सरकारलाई प्रभावित बनाउने यातायात...
क्यामरुनमा बोकोहरामका १२३ लडाकूको मृत्यु, १२ सैनिक घाईते
एनजामना, १७ माघ । क्यामरुनको उत्तरी भागमा चाडको सैनिक समूहमाथि बोको हराम लडाकूले आक्रमण गर्दा तीन सैनिक तथा १२३ इस्लामी लडाकूको मृत्यु भएको जानकारी चाडको सेनाले शुक्रबार दिएको छ । सीमावर्ती नगर फोटोकोल नजिकै...
डुङ्गा दुर्घटनामा परी बङ्गलादेशमा आठकोे मृत्यु
ढाका, १६ माघ । डुङ्गा दुर्घटनामा परी बङ्गलादेशमा आठकोे मृत्यु भएको छ ।बङ्गलादेशी यात्रुहरू सवार रहेको एक डुङ्गा बिहीबार दुर्घटना हुँदा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरु मध्ये शुक्रबार आठ जनाको शव प्राप्त भएको हो । माछा...
सरकारी कर्मचारीको न्युनतम तलब २१ हजार पुग्यो !
नयाँदिल्ली १६ माघ । बढ्दो मंहगी र प्रविधिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी कर्मचारीको न्युतम तलब बढेर २१ हजार पुगेको छ । छिमेकी देश भारतमा तल्लो तहका सबै कर्मचारीको न्युनतम तलब २१ हजार दिने निर्णय गरिएको...
इस्लामावाद, १५ माघ । भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने भनी अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले गरेको प्रस्तावप्रति पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ । हालै भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको भारत भ्रमणका क्रममा...
मन्त्रिपरिषद्का सदस्य भ्रष्ट भएपछि संसदद्वारा अस्वीकार
काबुल, १४ माघ । संसदले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु भ्रष्ट भएको भन्दै फेर्ने निर्देशन दिएको छ । अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति असरफ गानीले नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा मनोनयन गर्नुभएका प्रायः व्यक्तिलाई सांसदले बुधबार अस्वीकार गरिदिएका छन् भने यसले राष्ट्रिय एकताको...
अमेरिकासँग नजिक हुँदा रिसाएपछि चीनलाई फकाउँदै भारत
नयाँ दिल्ली, १४ माघ । भारत अमेरिकासँग नजिक भएपछि छिमेकी राष्ट्र चीन रिसाएको छ । चीन रिसाएपछि सम्बन्ध सुमधुर बनाउन भारतले आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई फाउनका लागि चीन पठाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारतसँग सम्बन्ध...
सैनिक कारबाहीमा ६६ विद्रोहीको मृत्यु, विमान दुर्घटनामा चारको मृत्यु
दमासकस, १४ माघ । सिरियाली सैनिकले सिरियाको कयौँ स्थानमा जारी राखेको कारबाहीका क्रममा ६६ जना विद्रोही मारिएका छन् । सिरियाली सरकारी समाचार समिति सानाले मङ्गलबार त्यस विषयमा जानकारी दिएको छ । दक्षिणी प्रन्त दाराको...
राष्ट्रपति ओबामा साउदी अरेबिया प्रस्थान
नयाँ दिल्ली, १३ माघ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा मङ्गलबार भारतको तीन दिने भ्रमणपछि साउदी अरेबिया प्रस्थान गर्नुभएको छ । उहाँको यो भ्रमण विश्वका ठूला प्रजातन्त्रबीच सम्बन्ध सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित थियो । नयाँ दिल्ली...
नेटो सैनिक विमान दुर्घटनामा दशको मृत्यु, अफगानिस्तानमा सात सैनिक मारिए
स्पेन/अफगानिस्तान, १३ माघ । सोमबार अपराह्नमा स्पेनको हवाई शिविरमा ग्रिकको एफ१६ विमान उडान भर्ने क्रममा भएको दुर्घटनामा १० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यस दुर्घटनामा परी अरु २१ जना घाइते भएका छन् । सो...
भारतमा अमिरेकी राष्ट्रपति ओबामाले के भने ? हेर्नुस !
नयाँ दिल्ली, १३ माघ । भारतको ६६ औं गणतन्त्र दिवसमा सहभागि हुन आउनुभएका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारत अमेरिकाको एक राम्रो साझेदार राष्ट्र बन्न सक्ने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा...